Malunga nathi -iChina SNS Pneumatic Co., Ltd.
China I-SNSI-Pneumatic yasekwa ngo-1999 ethi ngoku ibe ngumnikezeli ophambili wezinto zomoya e-China. Inkampani igubungela indawo ye-30000 ㎡, eneemveliso ezi-5 kunye neenkampani ezingaphezulu kwe-20 ezinabasebenzi abangaphezulu kwe-1000.SNS idlulile i-ISO9001 kunye ne-2000 yoQinisekiso lweNkqubo yoLawulo loMgangatho ngenxa yenkonzo elungileyo kunye nomgangatho ophezulu. Ukuza kuthi ga ngoku zingaphezulu kwama-200 iiarhente nabasasazi kwihlabathi liphela kwaye sijonge phambili ekusetyenzisweni kweemarike zamanye amazwe.
Ezona mveliso ziphambili ze-SNS kukudityaniswa komoya, iisilinda, iivalves, izixhobo, izixhobo zamanzi njl.njl. Ingaphandle entle, umgangatho oqinisekisayo kunye neendleko ezifanelekileyo zihlala zisilandela. Iimveliso zethu zithengisa kakuhle kulo lonke elase-China nakwimakethi yamazwe aphesheya ye-Asia-mpuma ye-Asia, Amazwe ase-Yurophu naseMelika, kuMbindi Mpuma, njl.
Ukugxininisa ekunyanisekeni kubathengi, ukuxhamla kunye kwintengiso, ukuvelisa izinto ezintsha kunye nokuzigqwesa, i-SNS iya kuliphumeza ikamva ngomgangatho wayo ophezulu.